Wasiir Fiqi “Khawaariijta waxaan leenahay, Galmudug cadaab baa yaala” | Dhacdo
Home Wararka Maanta Wasiir Fiqi “Khawaariijta waxaan leenahay, Galmudug cadaab baa yaala”
Wasiir Fiqi “Khawaariijta waxaan leenahay, Galmudug cadaab baa yaala”
Wasiirka Amniga Galmudug, Axmed Macalin Fiqi ayaa sheegay in maleeshiyada Al Shabaab ay jannada ka raadinayaan meel aanay oolin.
Wasiirka oo ka hadlayay hawlgalka Ciidanka Xoogga Dalka iyo kuwa Galmudug ay Isniintii kula wareegeen dhufeysyadii ugu dambeeyay ee Shabaabku ku lahaayeen deegaanka Qaycad ee Gobolka Mudug ayaa ku celiyay inaanan janno oolin Galmudug.
“Waad arkeyseen meydadkoodii siduu u uraayay, qof shahiid ahi maba uraba, inaysan shahiid ahayn oo baqti ay yihiin maantaa urkoodii aan ku aragnay xerooyinka. Qoryaha sidey u daadiyeen, qalabka kaloo ay ka taggeen oo isgaarsiintii, raashiinkoodii iyo wax alaala iyo wixii ay gacanta ku hayeen oo dhan waa daadiyeen, waana firxadeen, wixii dhintay mooyee intii kale waa firxadeen.” Ayuu yiri Wasiirka.
Wasiirka ayaa carabka ku adkeeyay in hawlgalka ka socdo Gobolada Dhexe uu sii socon doono, illaa iyo inta Shabaabka laga sifeynayo deegaanada Galmudug iyo guud ahaan dalkaba.
“Xarardheere iyo illaa Ceeldheer, dhulka ay Galmudug ka haystaan iyo dhulka Somaliya ay ka haystaanba waa la daba jooggaa nimankaas Khawaariijta.” Ayuu yiri Wasiirka.
Axmed Macalin Fiqi, Wasiirka Amniga Galmudug oo farriin u dirayay maleeshiyada Al Shabaab ayaa yiri “Waxaan rabnaa inaan farriin u dirno Khawaariijta, meeshaan janno ma taalo, meeshaan cadaab baa yaala, meeshaan wiilashaas tuutaha ku labisan ayaa joogga, meeshaan qoryaha BKM-ka ayaa yaala.”
Wasiir Fiqi ayaa yiri “Jano Masaajiddaa laga raadiyaa, janno waalidka oo baari loo noqdaa laga raadiyaa, janno dalkoo daacad loo noqdaa laga raadiyaa. Halkan janno ma taalo, meeshaan cadaabkaasaa yaala, qurunka aad ka cararteen baa yaala. Ha u soo dhawaanina dadkan, dadkan dadaa u soo dhawaan kartaan oo aad gumeysan kartaan maaha.”
Fiqi ayaa intaa ku daray “Wiilasha la soo marin-habaabiyay, farriintan u direyno waxay tahay fursad baad haysatiin, qaar idinka mida waa ka soo firxadeen, waana la soo dhaweeyay.”
Labada ciidan oo afartii toddobaadkii ee ugu dambeysay guluf militari ka waday Gobolka Mudug ayaa waxay kula wareegeen deegaano dhowra, oo Shabaabku ay ka arriminayeen.
Previous articleRa’iisal Wasaare Rooble oo u yeeray Guddiga Doorashooyinka G/waqooyi
Next articleRa’iisal Wasaare Rooble la kulmay Guddiga Doorashooyinka Somaliland (SAWIRRO)